Home Wararka Siyaasi Cabdijamaal Cismaan oo laga sii daayay xabsiga Hargeysa
Siyaasi Cabdijamaal Cismaan oo laga sii daayay xabsiga Hargeysa
Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya magalaada Haygeysa Siyaasiga Cabdijamaal Cismaan Maxamed, ayaa xalay laga sii daayay xabsiga magaalada Hargeysa, halkaas oo maalmo ka hor lagu xiray. Xukuumadda Somaliland kama hadlin sababta keentay xarriga, Cabdijamaal Cismaan oo ka soo jeeda Gobolka Sanaag, islamarkaana xilal heer wasiiro ah iyo xildhibaan ka soo noqday Puntland.
Qaar kamid ah siyaasiiyiinta ka soo jeeda Gobolka Sanaag, ayaa cambaareeyay xarigga Cabdijamaal Cismaan, ka hor intaan xalay xabsiga laga sii dayn. Siyaasi Cabdiraxmaan Dhoorre oo si adag u cambaareeyay arrintaas, ayaa sheegay in xarigga siyaasi Cabdijamaal ay ka dambaysay hay’adda Sirdoonka Puntland oo kaashanaysa Somaliland.
Dhanka kale, mas’uuliyiinta Puntland ayaan marna ka hadlin xarigga Ex.xildhibaan Cabdijamaal Cismaan oo xilal sare ka soo qabtay xukuumadihii kala dambeeyay ee Puntland.